China Isina-PVC Nyoro Bhegi Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
IV Solution Kugadzira Line - Nyoro Bhegi LVP
Isiri-PVC nyoro bhegi yekugadzira tambo ndiyo yazvino yekugadzira tambo neakawanda epamberi tekinoroji. Iyo inogona otomatiki kupedzisa firimu kudyisa, kudhinda, kugadzira bhegi, kuzadza nekuisa chisimbiso mune mumwe muchina. Inogona kukupa iwe wakasiyana bhegi dhizaini neayo imwechete chikepe mhando chiteshi, imwe / yakapetwa kaviri madoko, yakapfava nyoro chubhu chiteshi etc.
Inogona kuiswa kune 50-5000ml Isinga-PVC nyoro bhegi kune yakawandisa mhinduro, yakakosha mhinduro, dialysis mhinduro, parenteral chikafu, mishonga inorwisa mabhakitiriya, kudiridza uye disinfectant mhinduro nezvimwe.
Firimu Kudya, Kudhinda
Iyo inogona otomatiki kufudza firimu kune yekudhinda uye yekuumba chiteshi, iyo firimu mupumburu unogadziriswa neakareruka akavhiyiwa humburumbira zvisungo. Iko kugadzirisa hakudi chero maturusi uye basa remaoko.
Firimu Kutambanudza uye Kuvhura
Chiteshi ichi chinotora michina yemafirimu-yakavhurika ndiro. Kuvhurwa kwefirimu kwakavimbiswa 100%. Chero imwe nzira yekuvhura firimu haina vimbiso ye100%, asi zvakare iyo sisitimu yakanyanya kuomarara.
Peripheral Welding pamwe bilaterally yakavhurika anoumba mamiriro, kumusoro uye pasi anoumba dzinovhurwa bilaterally uye vakagadzirira pamwe kutonhora ndiro, kuti kudziyisa zvose anoumba kuti chete tembiricha kusvika 140 ℃ uye pamusoro. Hapana firimu pamusoro-yakabikwa panguva yebhegi kugadzira kana muchina kumira. Natsiridza chigadzirwa chekucheresa mhando uye chengetedza imwe firimu.
Yekutanga & yechipiri Zviteshi Zvekupisa Seal Welding
Nekuda kweakasiyana maficha uye hukobvu pakati pechikepe mhando chiteshi uye firimu, inotora 2 pre-kudziyisa, 2 kupisa chisimbiso kuwelding uye 1 inotonhorera welding, kuigonesa kuti ienderane neakasiyana epurasitiki zvinhu uye firimu, kuunza mushandisi zvimwe sarudzo, yepamusoro yekutengesa mhando, yakaderera leakage mwero mukati me0.3 ‰.
Gamuchira iyo E + H mashoma flowmeter kuyera uye yakanyanya-kumanikidza kuzadza system.
Imwe neimwe yekugumisa yekupedzisira nhovo inoshandisa yakaparadzana humburumbira kutyaira, uye dhiraivha unit yakavanzwa mudenga, gwara rekushandisa mitsara inobereka, isina chero chiratidzo uye zvikamu, ita chigadzirwa chigadzirwa chakajeka degree.
Bhegi Kuburitsa Chiteshi
Izvo zvigadzirwa zvakapedzwa zvichaburitswa kuburikidza nekuendesa bhandi kune inotevera nzira.
1. Imwe tambo yekugadzira inogona kugadzira 2 dzakasiyana mabhegi ane imwechete kana maviri akaomarara madoko.
2.Compact chimiro, diki inotora nzvimbo.
3. PLC, basa rine simba, kuita kwakakwana uye kutonga kwakangwara.
4.Tibata skrini mumitauro yakawanda (Chinese, Chirungu, Spanish, Russian etc.); data dzakasiyana dzinogona kuchinjika kumoto, kudhinda, kuzadza, CIP uye SIP senge tembiricha, nguva, kumanikidza nezvimwe, zvakare zvinogona kudhindwa sezvazvinodiwa.
5. Iyo huru dhiraivha inosanganiswa neinotorwa kunze servo mota ine synchronous bhandi, chaiyo nzvimbo.
6. Isinga-bata kupisa chisimbiso kudzivirira kusvibiswa uye kuvuza, kurasa mweya usati waisa chisimbiso.
7. Yakafambiswa yemass kuyerera mita inopa chaiyo yekuzadza, vhoriyamu inogona kugadziridzwa zvirinyore nemurume-muchina interface.
8. Inopindirana nemweya kudya uye kupera, kushomeka kushoma, ruzha rwezasi, yakavimbika uye yakanaka chimiro.
9. Muchina maalarm kana paramende kukosha inodarika izvo zvakaiswa setup.
10.Iyo purogiramu inogona kutsvaga uye kuratidza akakanganisa mapoinzi pane yekubata skrini pakarepo kana matambudziko aitika.
11. Ndangariro yakasimba. Chairo kutenderera uye kuzadza parameter kunogona kuchengetwa, kana uchinjira kumafirimu akasiyana uye zvinwiwa, paramita dzakachengetwa dzinogona kushandiswa zvakananga pasina kugadzirisa patsva.
12. Special CIP uye SIP kuchengetedza nguva yekuchenesa uye kuona sterilization yakanaka.
13. Parameter kumisikidza nekuzvidzivirira, dhata dzinogona kungoshandiswa nekubata skrini, pre-seti yakakwira uye shoma kukosha kuti udzivise kukanganisa kwekunyepedzera.
14. Tsananguro ye100 / 250/500 / 1000ml nezvimwewo, zvinongoda kuchinja chakuvhuvhu nekudhinda mapaneru kuchinjira kune akasiyana mafekitori, nyore, nekukurumidza.
Chinhu Zviri Mukati
Muenzaniso SRD1A SRD2A SRS2A SRD3A SRD4A SRS4A SRD6A SRD12A
Chaiko Kugadzira Kugona 100ML 1000 2200 2200 3200 4000 4000 5500 10000
Simba Rinobva 3 Chikamu 380V 50Hz
Simba 8KW 22KW 22KW 26KW 32KW 28KW 32KW 60KW
Yakadzvanywa Mhepo Kumanikidza Yakaoma uye isina mafuta-yakadzvanywa mweya, iyo yakachena ndeye 5um, iko kumanikidza kuri pamusoro pe0,6Mpa.Muchina unozozvimiririra wobva wamira kana kumanikidza kwanyanya
Yakamanikidzwa Mhepo Kunwa 1000L / mim 2000L / mim 2200L / mim 2500L / mim 3000L / mim 3800L / mim 4000L / mim 7000L / mim
Yakachena Mhepo Pressure Iko kumanikidzwa kwemweya wakachena wakamanikidzwa uri pamusoro pe0.4Mpa, iyo yakachena iri 0.22um
Yakachena Mhepo Kunwa 500L / min 800L / min 600L / min 900L / min 1000L / min 1000L / min 1200L / min 2000L / min
Kutonhora Kwemvura Pressure > 0.5kgf / cm2 (50kpa)
Kutonhora Kwemvura Kunwa 100L / H 300L / H 100L / H 350L / H 500L / H 250L / H 400L / H 800L / H
Nitrogen Kushandiswa Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinogona kushandisa iyo nitrogen kudzivirira muchina, iko kumanikidza kuri 0.6Mpa. Iko kushandiswa kuri pasi pe45L / min
Kumhanya Ruzha <75dB
Zvinodiwa mumba Kupisa kwezvakatipoteredza kunofanira ≤26 ℃, hunyoro: 45% -65%, Max. mwando anofanira asingasviki 85%
Saizi Yese 3.26x2.0x2.1m 4.72x2.6x2.1m 8x2.97x2.1m 5.52x2.7x2.1m 6.92x2.6x2.1m 11.8x2.97x2.1m 8.97x2.7x2.25m 8.97x4.65x2.25m
Kurema 3T 4T 6T 5T 6T 10T 8T 12T
*** Cherekedza: Sezvo zvigadzirwa zvichingowedzeredzwa, ndapota taura nesu nezvezvazvino maratidziro. ***
Pashure: PP Bhodhoro IV Solution Kugadzira Line
Zvadaro: Multi Chamber IV Bhegi Kugadzira Lline
Isina-PVC Nyoro Bhegi Muchina
Non-PVC Soft Bhegi Kugadzira
Isiri-PVC Nyoro Bhegi Oem
Prefilled Syringe Yekuongorora Machine
Prefilled Syringe Vagadziri
Disposable Syringe & Tsono Production Line, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Ampoule Muchina À Coudre Led, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Bernina,